Madheshvani : The voice of Madhesh - कास्की जिल्लामा भारतद्वारा तीन शैक्षिक संस्था निर्माण
कास्की जिल्लामा भारतद्वारा तीन शैक्षिक संस्था निर्माण
काठमाडौं, २ मंसिर । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारको सहयोगमा कास्की जिल्लामा तीन शैक्षिक संस्था निर्माण भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले शनिबार लेखनाथ नगरपालिकास्थित श्री सरस्वती टिका उच्च माध्यमिक विद्यालयको उद्घाटन गरेका छन् ।
उक्त उद्घाटन समारोहमा भारतीय दूतावासका मिशन उप(प्रमुख डा. अजय कुमार उपस्थित थिए । डा. अजय कुमारले शनिबार श्री लक्ष्मी आदर्श महुमुखी क्याम्पस र श्री गुप्तेश्वर महादेव महुमुखी क्याम्पसको पनि उद्घाटन गरे ।
श्री सरस्वती टिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ३७.१० मिलियन नेपाली रुपैँया बराबरको भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिएको होे । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डसँग आबद्ध उक्त विद्यालयले १०+२ तहका विभिन्न कार्यक्रम प्रदान गर्दै आएको छ ।
कास्की जिल्लाको प्रतिष्ठित उक्त विद्यालयले त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । सो विद्यालयमा अध्ययनरत झण्डैै ११०० विद्यार्थीमध्ये ४५ प्रतिशत छात्रा छन् ।
नेरु ४८.४० मिलियन भारतीय सहयोगमा श्री लक्ष्मी आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको निर्माण भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेको उक्त क्याम्पसले शिक्षा संकायमा स्नातक तहसम्म चार वर्षे पूर्णकालिन कार्यक्रम एवं १०+२ तहमा व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकायमा पनि सेवा प्रदान गर्दछ । यस क्याम्पसमा ४ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् जसमध्ये ८५ प्रतिशत छात्रा रहेका छन् ।
नेरु ४१.१० मिलियन बराबरको भारतीय सहयोगमा श्री गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसको निर्माण भएको हो । यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेका एक गैरनाफामूलक प्राज्ञिक संस्था हो जसले बि.एड., बिबिएस र एमबिएस संकायमा सेवा प्रदान गर्दछ । सन् २०१८को शैक्षिक सत्रदेखि यस क्याम्पसले बिएचएम र बिआईएम संकायमा पनि अध्यापन शुरु गरेको छ । यस क्याम्पसमा ४ सय १८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् जसमध्ये ८० प्रतिशत छात्रा रहेका छन् ।